Onye ọwụwa anyanwụ Anatolia Region Arsiv - RayHaber
Obodo Diyarbakır nke ga-enye ndị njem ọhaneze ga-akwụ ụgwọ n'oge 4 Day n'oge Eid al-Adha. N’ụbọchị mbụ nke ehihie na ememme ahụ, a ga-ebuga ụmụ amaala n’ili ndị akwụghị ụgwọ site na ebe edepụtara na mgbanaka a ga-eji ụgbọ 63 mepụta. Ngalaba Transportgbọ njem Diyarbakır [More ...]
Onye isi obodo nke Şanlıurfa nke Obodo isi obodo Zeynel Abidin Beyazgül'un nyere aka ime ka ọrụ owuwu ọkụ nke Karakoyun Bridge Junction malite. Mgbe ndị ọrụ ngo ahụ kwụsịrị ọrụ ndị ahụ, Köprülü na ntuziaka nke Mayor Zeynel Abidin Beyazgül [More ...]
Ndị otu Sanliurfa Metropolitan Municipality, ndị weghaara ntụgharị mgbanwe nke Karakoyun Bridge na ntuziaka nke Mayor Beyazgül mere ka ọrụ ha dịkwuo elu n'ọhịa iji gbochie ụmụ amaala ahụ inwe nsogbu na njem. Okporo ụzọ Sanliurfa ga-ezu ike nke ukwu site na Obodo ukwu [More ...]
Mmezigharị nke ọkwa nrịgo na Batman
United Transport Workers Union (BTS), Batman Co-Mayors Dr. Ọ gara Mehmet Demir na Songül Korkmaz n'ọfịs ya wee gbanwee echiche banyere ọnọdụ nke ịgafe larịị na Statezọ Stategbọ njem Turkish State. [More ...]
Usoro mkparịta ụka Sarp na-etinye na Gaziantep
Sarp Intermodal, otu n'ime ụlọ ọrụ ndị isi nke njem intermodal, nọgidere na-etinye ego n'ime ụlọ ya. Ụlọ ọrụ ahụ mepere ọfịs na Gaziantep ma gafee ndị na-eme njem na mpaghara a si Mersin Port gaa Europe na North Africa site na intermodal. Italy, Bulgaria na ọrụ Germany na mba ọzọ [More ...]
Ndi Diyarbakır choro ka ha tinye aka oru. Ndị mmadụ na-achọ ịga ngwa ngwa, n'ụzọ dị mfe na n'enweghị nsogbu. Dị ka akụkọ banyere Seyfettin Eken si Güneydoğugüncel; Belediye Municipalities na ọtụtụ oge ntuli aka tupu [More ...]
Şanlıurfa Ga-aga n'Ụzọ nke Oge A
Mayor Zeynel Abidin Beyazgül'ın ntụziaka iji mee ka okporo ụzọ na rụọ ọrụ mgbapụta nke Metropolitan Municipality, obodo ukwu ahụ ma nọgide na-emejupụta ógbè ahụ. Ụmụ amaala, ekelere Beyazgül na ndị otu maka ọrụ siri ike. Ozugbo ọ malitere ọrụ [More ...]
3 na Ala Ugwu MNMA nke 412 kwa ọnwa
Obodo ukwu nke mepere emepe, bụ nke mekwuru mgbalị iji wuo okporo ụzọ 100 nke okporo ụzọ dị iche iche dị n'ime ime obodo, mekwara ka ihe onwunwe na ngwa ngwa rụọ ọrụ na Şanlıurfa obodo na mpaghara obodo 13 na ntụziaka Mayor Zeynel Abidin Beyazgül. Sanliurfa obodo [More ...]
President Zeynel Abidin Beyazgül, onye mere nnyocha banyere mgbagwoju anya na ịpụpụ na Karaköprü n'ihi mmiri ozuzo n'oge oyi, kwuru na ọrụ malitere na mpaghara echi ya na ngwụcha nke ọmụmụ ọmụmụ na usoro dị nro anyị malitere na 1 n'April. oyi [More ...]
Njikwa ụgbọ mmiri na Ụgbọ njem na Diyarbakir
Obodo Dibanbakir Obodo ukwu emeela ka ndị na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè na-eje ozi na obodo na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke igwe na-arụ ọrụ na mbara igwe n'ihi okpomọkụ ihu igwe nke dị n'elu usoro oge. Diyarbakir Obodo ukwu, n'ihi ikuku nke elu igwe karịa oge ndị nkịtị, ụgbọ okporo ígwè na-eji nwayọọ eme ihe [More ...]
Şanlıurfa Metropolitan Municipality mere na mgbe a obere oge maka ozi ahụ malitere, nke ga-ọkọnọ ka ụmụ amaala na Turkey kasị ukwuu korota Paving ọrụ n'oge a Ụmụaka Traffic Training Park. Turkey-ntà obodo nke Şanlıurfa nwata na-eme n'ọdịnihu [More ...]
Obodo Gaziantep Municipality Transportation Coordination Center kpebiri ịkwalite ụgbọ okporo ígwè na-ebufe ndị mmadụ. Ụtọ tarifụ ọhụrụ ahụ nke na-abanye n'ike na mmụba ga-adị irè dịka nke 1 July 2019 ... [More ...]
Gaziantep Metropolitan Municipality nke Republic of Turkey State Railways (TCDD), akporo nke protocol aka n'etiti ụbọchị nke 22 May 2014 Gaziray COMMUTER Okporo ígwè Project nke 85 percent nke ọrụ owuwu e dechara. Ụgbọ okporo ígwè, nke bụ isiokwu nke egwu egwu ndị mmadụ, na-agbanwe dị ka ụgbọ okporo ígwè dị elu. [More ...]
TCDD, nke malitere njem ụgbọ mmiri na-eme njem nleta na Ankara-Kars, na-achọ inye ndị ọzọ ụgbọ ala abụọ ọzọ. Olcay Aydilek Habertürk'ten, dị ka Ministry of Transport si kwuo, ụgbọ okporo ígwè TCDD'ye malitere ịkwadebe maka mbido nke oké mkpa. Na nke a [More ...]
Ihe Omume nke Batman
Kwa ụbọchị, ihe dịka puku mmadụ iri abụọ na isii na-aga n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè Batman-Diyarbakir, ụgbọ okporo ígwè dị ugbu a ma na-arụ ọrụ, a na-ezube njem ụgbọ okporo ígwè dị ka okporo ígwè. Mgbasa ozi anyị malitere maka njem nke Raybus bụkwa ihe kacha mkpa maka Batman. [More ...]
Ndị na-eme njem nleta na-abata n'asụsụ Diyarbakir
Diyarbakır Municipality, 2 asụsụ, iji hụ na ihe kacha mkpa na nchekwa nke okporo ụzọ na-agafe n'obodo ukwu, n'okporo ámá ebe okporo ụzọ na-ebuwanye ibu na ụgbọala, asụsụ XNUMX, ederede anya na-akwado. Obodo Diyarbakır Obodo ukwu Ụgbọ njem [More ...]
Edere usoro nkwekọrịta n'etiti n'etiti obodo Şanlıurfa Metropolitan Municipality na Şanlıurfa Gọọmentị Investment Investment Monitoring na Coordination Directorate (YİKOB) gbasara ihe ndị a ga-eme n'ime "Ọrụ Enyemaka Obodo". Mayor nke Şanlıurfa Metropolitan Municipality Zeynel Abidin Beyazgül [More ...]
Şanlıurfa Metropolitan Municipality Owuwu 6 Boulevard
Ịga n'ihu ngwa ngwa Metropolitan Municipality korota ọrụ ọnụ na mma na n'oge a kara aka na ọnọdụ, ọ na-aga n'ihu na-ewu nke Boulevard n'etiti obodo n'otu oge 6. N'aka nke aka na oguzobe ebe obibi ndi ozo n'ime obodo maka njem ndi na enweghi nsogbu [More ...]
Şanlıurfa Mayor Zeynel Abidin Beyazgül, na-aga n'ihu na-ewu Ụlọ Ọrụ Nkụzi Traffic ụmụaka. Iji kwado nsogbu nsogbu okporo ụzọ na Şanlıurfa, obodo nke Büyükşehir, na-eme boulevards, ndị na-agagharị agagharị, ndị na-agafe agafe na ndị na-agafe agafe, bụ ọha mmadụ maara nke ọma. [More ...]
Batman na-ekwusi ike ịrịọ bọs
More ọrụ n'etiti Adana-Mersin Turkey State Railways (TCDD) Raybüs nke oge, na-oru na Diyarbakır-Batman Batman ka ulo oru atumatu ụfọdụ okirikiri. Ọrụ TCDD Rail Bus, nke na-arụ ọrụ n'etiti Adana na Mersin, ga-amalite n'etiti Batman na Diyarbakır. [More ...]
Chọta obodo nke Gaziantep Bike Ride
Obodo Gaziantep Obodo ukwu Obodo Ntorobịa na Ngalaba na Ngalaba Nchịkọta na Council Council kwadoro "Ịchọpụta Obodo" igwe ịnyịnya ígwè. Iji mee ka ígwè na ígwè dị elu na ịdọrọ uche gaa n'okporo ụzọ ígwè, Obodo Metropolitan [More ...]